Yurie बीएसएफ आवेदन • Yurie बीएसएफ
Yurie BSF अनुप्रयोग
Yurie | नोभेम्बर 22, 2018 | Playsrore मा Yurie BSF अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्
Yurie बीएसएफ आवेदन एक प्रोग्राम हो जुन जानबूझो सिर्जना गरिएको छ, खेती लागू गर्न मद्दत बीएसएफ उडान कागजातहरू र भिडियो ट्यूटोरियलहरूबाट उत्पादन सफलता अभ्यासहरूमा मगग पशुहरू/ hoard गजल।
डिजाइनर अनुप्रयोगहरूमा Yurie BSF धेरै परिष्कृत कार्यक्रम भाषा प्रावधानहरू प्रयोग गर्दछ। अप्रत्यक्ष लाइभ च्याट बिना अनुप्रयोग छोड्न वा बाहिर निस्कन। त्यसैले यदि त्यहाँ प्रश्नहरू छन् भने तुरुन्तै प्रसारण गर्न सक्नुहुन्छ।
परिष्कृत हुनुको साथै, फाइल लोड धेरै सानो र हल्का छ, जुन 17 एमबी हो। यसैले यसले प्रयोगकर्ताको सेलफोन ओवरलोड गर्दैन।
अर्को कुरा Yurie BSF अनुप्रयोग एक चरण-दर-चरण SOP सँगै प्रयोगकर्तालाई अनुप्रयोगमा पाठको प्रत्येक पक्ष प्रयोग गर्न सजिलो बनाउनको लागी हो।
र सबैभन्दा फायदेमंद छ किनभने यस अनुप्रयोगमा अर्को प्रयोगकर्तासँग एक प्रयोगकर्तासँग अन्तरक्रिया गर्ने क्षमता छ। त्यसैले Yurie बीएसएफ आवेदन प्रयोगकर्ताहरूको लागि यो धेरै फायदेमंद छ। Yurie BSF अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्
Yurie BSF अनुप्रयोग कस्तो श्रेणी हो?
प्लेस्टोरमा समावेश अनुप्रयोगबाट धेरै प्रकार को कोटीहरू छन्। त्यसपछि Yurie बीएसएफ आवेदन कुन वर्गमा समावेश छ?
यस श्रेणीमा समावेश एक एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको प्रदर्शन र कार्यक्षमता सुधार गर्न हो। उदाहरणहरू: 360 सुरक्षा, सफा मास्टर, Google अनुवाद, Greenify, अडियो रेकर्डर, आदि।
अनुप्रयोग प्रकारका सामाजिक अनुप्रयोगहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै अन्य व्यक्तिसँग जडान गर्छन्। उदाहरण: फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, Google+, आदि
च्याट वा आवाज मार्फत अन्तरक्रिया गर्न प्रयोगकर्ताहरूको लागि सुविधाहरू प्रदान गर्नुहोस्। उदाहरण: बीबीएम, व्हाट्सएप मेसेन्जर, लाइन, फेसबुक मैसेन्जर, विट्याट, काकाओटा, आदि।
यो श्रेणी अनुप्रयोग फोटोग्राफी उद्देश्यका लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणहरू: क्यामेरा 360, PicsArt, B612, Magisto, MomentCam, र Adobe Photoshop, आदि।
समाचार र पत्रिका आवेदन
आवेदन समाचार र पत्रिका अनुप्रयोग एक समाचार अनुप्रयोग वा पत्रिका हो जुन सीधा HP मा पढ्न सकिन्छ उदाहरणका लागि: बेबी, कुरियो, डिटिक, भिवा न्यूज, कमपा, आदि।
मनोरञ्जन अनुप्रयोग अधिक मनोरञ्जन हो। उदाहरणहरू: सङ्गीत, खेलहरू, टिभि, स्ट्रीमिंग भिडियोहरू।
Yurie बीएसएफ आवेदन यस श्रेणीमा हुन्छ, अर्थात् शिक्षा आवेदन। सामान्यतया यो कोटीको आवेदन उद्देश्यमा मद्दत गर्न उद्देश्य हो। उदाहरणहरूः बालबालिकाको शैक्षिक खेलहरू, स्मार्ट बच्चाहरू, स्मार्ट गणित, डुओलिङो: फ्री भाषा सिक्किङ, आदि।
किनभने Yurie बीएसएफ आवेदन आफैले शिक्षा हो यो अनुप्रयोग विज्ञापन-मुक्त छ त्यसैले प्रयोगकर्ताहरू विज्ञापन द्वारा परेशान बिना पढ्न सहज सहज छन्।
सामान्यतया विज्ञापनहरू विज्ञापनदाताहरूले भुक्तान गरेको आय प्राप्त गर्न लक्ष्य प्रदान गरेका छन्। यसको अर्थ छ कि विज्ञापन-रहित Yurie BSF अनुप्रयोगले प्रयोगकर्ताबाट कुनै राजस्व प्राप्त गर्दैन।
यो शुद्ध Yurie BSF छ 100% साझा गर्न चाहान्छ।
Yurie BSF अनुप्रयोगमा के सुविधाहरू छन्?
यस अनुप्रयोगमा धेरै सुविधाहरू छन्, अर्थात्
Rp100.000.000 व्यापार सहायता कोष, -
SMELL को बिना आधुनिक बीएसएफ खेती
नि: शुल्क 100% प्याकेज
चांदी प्लस प्याकेज
सुन प्लस प्याकेज
प्लैटिनम प्लस प्याकेज
Yurie BSF गुप्त समूह
टिलापिया खेती गर्दै
Yurie BSF डट कम
हाम्रो बारे मा युरी बीएसएफ
Yurie बीएसएफ एक मात्र कम्पनी हो जसले खेतीको अग्रगामी Maggot BSF संसारमा आधुनिक बगैचा।
नराम्रो मगगोटको उत्पादनले बर्बाद, कचरा, पशुपालिकाको खाँचो गर्दछ। मगगट खेती गर्दै गंध बिना किण्वन को पहिचान गर्दैन, ड्रग्स को उपयोग गर्दैन र एक मिसिन को आवश्यकता छैन।
त्यसो कि म्याग्गोट उत्पादन सजिलो र सस्तो छ, Rp बीच
यो साथी साथीहरु युरी बीएसएफ साथीहरु लाई वितरित गरिन्छ जो सजिलै संग आफ्नो म्याग्दी को यूरी बीएसएफ मा बेचन गर्दछ।
यस सहयोगको उद्देश्य Yurie बीएसएफ मित्रहरु को लागी यसको लागी Yagie मा आफ्नो चुम्बन र जुल उत्पादन को बढावा दिन को लागि छ।
यस सुविधामा विभिन्न भिडियो ट्यूटोरियलहरू बिना गन्ध बिना म्यागगट खेतीको अभ्यासमा प्रदान गरिएको छ। तपाइँ भर्खरै भिडियो हेर्न दिशानिर्देश अनुसार यो हेर्नुहोस् र अभ्यास गर्नुहोस्।
यो सुविधामा ट्यूटोरियल भिडियोहरू सामाजिक मिडिया र यूट्यूबमा वितरित छैनन्। किनभने यो भिडियो र कागजात विशेष रूपमा Yurie को साथीहरूको लागि प्रदान गरिएको छ।
नि: शुल्क 100% म्यागजिन खेती गर्न सिक्दै, यो प्याकेज विशेष गरी ती व्यक्तिहरूका लागि हो जसले भुक्तानी प्याकेज बर्न गर्न सक्दैन। नियम र सर्तहरू कृपया 0812-2105-2808 मा Mbak Yurie लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
Yurie BSF अनुप्रयोग किन महत्त्वपूर्ण छ?
किनकि यो अनुप्रयोग कुनै गन्ध बिना मग खेती गर्ने अभ्यासमा एक प्रयोगकर्ता उपकरण हो
तपाइँ अभ्यास गर्नुभन्दा अघि, तपाइँ अनुप्रयोगमा ट्यूटोरियल भिडियोहरू हेर्न गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए जब तपाईं खेतीमा जानुहुन्छ त्यहाँ प्रारम्भिक विवरण हो।
अभ्यास पछि, हामी प्राय: बिभिन्न चीजहरू हौं जुन हामी बिर्सन्छौ, वा घरमा अभ्यास गर्दा केवल आफैलाई समझाउन चाहन्छु, त्यसकारण तपाइँले मात्र यो भिडियो ट्यूटोरियल पुन: खोल्नुपर्छ।
भिडीयो र महत्त्वपूर्ण कागजातहरू दुवैको रूपमा नवीनतम अद्यावधिकहरू यस अनुप्रयोग मार्फत अपडेट गरिन्छ, त्यसो भए जहाँ तपाईं पनि हुनुहुन्छ भने मगग बिना खेतीको खेतीको बारेमा ताजा अधिसूचनाहरू र अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्दछ।
शुरुवात र वरिष्ठ को लागि दुवै निश्चित रूप देखि मगग व्यापार व्यवसाय अपडेट को आवश्यकता हो र यो आवेदन को माध्यम ले जानकारी पठाइनेछ।
Yurie बीएसएफ आवेदन Maggot पशुहरूको सफलता कसरी सम्बद्ध छ?
अभ्यासमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष निर्देशन आवश्यक छ। र त्यसो गर्नका चरणहरू।
अनुप्रयोगमा प्रविधि भिडियो यस प्रकारको क्रमबद्ध गरिएको चरण चरण अनुक्रमको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ र त्यहाँ एक SOP (मानक सञ्चालन प्रक्रिया) छ। त्यसो कि त्यहाँ कार्यविधिहरूको एकरूपता छ र बेशक परिणामहरू पनि समानता हुने आशा छ (लुकाउनु हुँदैन)
युनीको साथीले सबै ठाउँमा अनुप्रयोगमा दिशानिर्देशहरू पछ्याउने आशा गर्दछ जुन 1,5 महिना भन्दा कम सेकेन्ड किग्रा म्यागगटको फसलको लक्ष्यमा पुगेको छ।
र कसरी प्राप्त गर्न यो अवस्थित भिडियो ट्यूटोरियल पछ्याएर। त्यसैले यो अनुप्रयोग धेरै महत्त्वपूर्ण र धेरै आवश्यक छ कि म्याग्ग उत्पादन उत्पादनको लक्ष्य प्रशस्त र बेजोड नतिजाहरू प्राप्त गर्न।
Yurie BSF अनुप्रयोगहरूको फाइदाहरू र प्रयोगहरू
जोडिएको छैन किनभने कार्य चरणहरू स्पष्ट छन्
सँधै अपडेट गरियो
त्यहाँ त्रुटि र खोल घटाउन मानक उपायहरू छन्।
दैनिक जागा उत्पादन अधिक आत्मविश्वास र स्वतन्त्र छ
मगगोट उत्पादनमा बढी व्यवस्थित।
कंक्रीट परिणामहरूसँग प्रदर्शन स्तरहरू सिर्जना गरियो
उत्पादन सुधार गर्न उपकरणहरू पाउनुहोस्
कार्य गरेको मूल्याङ्कन गर्न एक गाइड छ।
चाँडै म्याग्गोट काम गर्न एक सुरक्षित र आरामदायक दौड सिर्जना गर्न।
थप व्यवस्थित र कुशल।
एक दिशानिर्देश दैनिक म्यागजिन खेती गर्न मा छ।
अतिव्यापी कार्यबाट बचाउनुहोस्।
यदि त्रुटि हो भने, ब्राउज गर्न र विश्लेषण गर्न सजिलो छ
कार्य प्रक्रिया अधिक ग्यारेन्टी छ र परिस्थितिमा राम्रो तरिकाले चलाउन सक्छ।
Yurie BSF अनुप्रयोगहरूको सारांश
अनुप्रयोगमा ट्यूटोरियल गाइड एक उपकरण हो र एक सफल गाडीले मगग बिना गन्ध खेती गर्दछ।
1,5 महिना भन्दा कम सेकेन्ड किलोग्राम किनेको सफलता दरमा यो अनुप्रयोग धेरै प्रभावशाली छ।
अनुप्रयोगमा दिशानिर्देशहरू पछ्याउँदछ कि तपाइँ प्रचुर मात्रामा चुम्बन, निरन्तर उत्पादन, सफल बिना, सुरक्षित, सहज, र आत्मविश्वास बढाउन सफल हुनाले लामो अवधिको लागि म्याग्गोट खेती चलाउन सक्दछ।
99 बिना बो रन्च बिना Maggot को स्थान
मगग खेती स्केल को चार विश्लेषण
मार्केटिङ र खरिद गर्ने र मगग बेच्ने
मैगगोटको खेती FAQ
साइट मानचित्र Yurie BSF